Rugaha Caafimaadka ee NAR - VANTAGE | Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay haysaa Diiwaanka Kaaliyaha Kalkaalinta Caafimaadka, kaas oo liis gareeya magacyada shaqsiyaadka dhammeystiray tababarka kaaliyaha kalkaalinta kalkaaliye caafimaad ee la ansixiyay iyo barnaamijka tijaabada ama barnaamij tijaabo ah oo la kulma shuruudaha gobolka iyo federaalka ee ka shaqeeya guryaha daryeelka dadka da'da ah iyo guryaha xanaaneynta sharciyeysan.
Hoos ka eeg Tallaabooyinka xiga
Helitaanka Diiwaanada Caawinaada Kalkaalinta waa ikhtiyaar VANTAGE
Ardayda Sayniska Caafimaadka Vantage Health Science waxay qaataan ama qaataan fasalka EMR ama NAR iyagoo qayb ka ah VANTAGE Sciences Strand. Dhameystirka fasalkani waa waxa kaliya ee looga baahan yahay dhameystirka shaxanka VANTAGE.
Dhameystirka fasalkan kuma filna helitaanka NAR (Kalkaaliyaha Caawinta Kalkaalinta) ee gobolka Minnesota. Ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha dheeraadka ah si looga diiwaangaliyo Gobolka Minnesota. VANTAGE ayaa fududeynaya, laakiin uma baahna ama mas'uul kama aha, dhammaystirka shuruudahan dheeriga ah.
Shuruudaha Shahaadada ee NAR
Si looga diiwaangaliyo Gobolka Minnesota iyada oo loo marayo VANTAGE, ardaydu waa inay dhammaystiraan saddex tallaabo:
Gudub gobolka VANTAGE fasalka NAR ansixiyay - cunugaaga hadda waa la diiwaangaliyay. Ma jiro talaabo dheeri ah oo loo baahan yahay, oo aan ahayn in lagu gudbo fasalka.
Gudub imtixaanka gobolka NAR
Saacado caafimaad oo dhameystiran oo loo baahan yahay
Gudub imtixaanka NAR
Macluumaadka ku saabsan Imtixaanka Gobolka Minnesota ee NAR waxaa laga heli karaa websaydhka Waaxda Caafimaadka ee Minnesota. Waxaa jira goobo badan oo aad imtixaanka ku geli karto. Xulashada ugu dhow waa Hennepin College College ee Eden Prairie:
13100 Kulliyada View College
Qiimaha imtixaankan iyo xarumaha badankood waa qiyaastii $ 175.
Saacadaha Caafimaad ee Looga Baahan Yahay
Si loo helo shahaadada gobolka, ardaydu waa inay dhammaystiraan 16 saacadood oo caafimaad oo ay la shaqeeyaan kalkaaliye caafimaad oo la oggol yahay oo lagu hayo guriga xannaanada dadka liisan leh. Inta la sugayo helitaanka wada-hawlgalayaasha, VANTAGE waxay fududayn doontaa dhammaystirka ardayda ee saacadaha caafimaad. Inta badan saacadahaan rugta caafimaad ayaa la dhammaystiri doonaa bilaha May iyo horraanta Juun.
Saacadaha Clinical Iyadoo loo maro CAPSTONE
Ardayda waayeelka ah ee uqalma CAPSTONE waxay dooran karaan inay dhameystiraan xarumaha caafimaadka sida mashruucooda CAPSTONE. Waxaa jira shuruudo dheeri ah oo loogu talagalay CAPSTONE, iyo ardayda dhammeyneysa xarumaha caafimaadka ee loo maro CAPSTONE ayaa mas'uul ka ah dhammaan shuruudaha dheeriga ah. Ardayda dhammaysata kilinigyada caafimaad ee loo maro CAPSTONE waxay u badan tahay inay 16 saacadood oo kiliinikada ah ku sameeyaan seddex wareeg inta lagu gudajiro saacadaha shaqada ee caadiga ah muddada CAPSTONE kahor dhamaadka sannad dugsiyeedka.
Saacadaha Clinical oo aan lahayn CAPSTONE
Ardayda dhammaysata kilinigyada aan lahayn CAPSTONE waxay dhammaystiri doonaan 16-ka saacadoodba saddex shaqo ka dib dugsiga ama dhammaadka wiigga.
Ardayda VANTAGE NAR waxay u baahan yihiin inay soo gudbiyaan foomka soo socda ee muujinaya doorbididdaada caafimaad ee ugu dambayn bisha Febraayo 5, 2019.
Sayniska Caafimaadka /